ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukurongeka kweMMAD (Demethyldolastatin 10) (CAS 203849-91-6), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutsika.
Uyezve, MMAD inonzi inoshandiswa mukugadzirwa kwenzvimbo-inonzi anti-anti-drug conjugates (NDCs). Mune NDCs, MMAD inosanganiswa ne anti-5T4 antibody kana anti-Her2 antibody. Inoratidzirwa kuti iyo NDCs inoratidza huri nani hwekuita uye pharmacokinetics.
MMAD (Demethyldolastatin 10) zvakadzama
Storage Temp: Poweri -20 ° C 3 makore
4 ° C 2 makore
Mukusanganiswa -80 ° C 6 mwedzi
-20 ° C 1 mwedzi
Color: Yakachena kusvika kune-yakachena (yakasimba)
MMAD (Demethyldolastatin 10) (203849-91-6) kushandiswa mu steroid cycle
Dhiyabhorosi: Demethyldolastatin 10 (203849-91-6); Monomethylauristatin D; Monomethyl Dolastatin 10
Yambiro pamusoro peMMAD (Demethyldolastatin 10)
Chigadzirwa hachina kugadziridzwa zvizere nokuda kwekushandiswa kwechiremba. Kutsvakurudza kunoshandisa chete
In Vitro: MMAD (Demethyldolastatin 10) (203849-91-6) inobatanidza kuburikidza nehutano hwakagadzikana hwe-oxime-ligation kuti ibudise huwandu hwemagetsi anonzi anti-anti-drug conjugates (ADCs) nechirwere chemishonga-kusvika-antibody che ~ 2.0. Izvozvo zvinogadziriswa zvinoratidzira zvakanaka pharmacokinetic properties, zvakanyanya in vitro cytotoxic basa rinopesana neHER2 + kenza dzemasero. Kana ichienzaniswa neADCs yakagadzirirwa ne-cysteine ​​alkylation inotevera nharaunda inopinda disulfide kuderedza, nzvimbo-chaiyo isina kusimba-amino-acid-based ADCs inoratidzwa kuti yakawedzera mu vitro cytotoxicity
MuVivi: Izvozvo zvinokonzerwa nehutachiona-zvinokonzerwa nemishonga (ADCs) zvinoratidza chiremera chakakwana chechirwere mumakonzo. Izvo zvakare vane huwandu hwakanyatsonaka hwehuwandu hwezvinyorwa mumakonzo.
Nzira yekutenga MMAD; Tenga Demethyldolastatin 10 kubva kuAASraw